Malaysia aphan mi kawlram mi an mah le anmah hitiin an hrem – Lily Par
Malaysia aphan mi kawlram mi an mah le anmah hitiin an hrem
June 12, 2019 joseph phun kip 0
Malaysia aphan mi kawlram mi an mah le anmah hitiin an hrem hna, Rakhine ram Minpia Myoh ne,Tawngsi ping khua(Chin zua) ah um mi Maung ci kum 19 mi cu arian tuan nak dum ah rian atuan duh tilo tik ahatli te in chhuak atimh mi cu Amahaauh mi poi sa nih athei tik ah misual pawlasawm hna i hitiin atuah ter hna.
Poisa zong thla6chung ah acham dih cang nak in amah dum chungah atuan huam tik lo tikah Poisa nih atheih tik ah avuak ter hna, ti asi, afak ngai ko,poisa kha ahau dah asi theih u selaw amah zong hrem aphu ko hi ta
atang link ah khan lut ulaw zoh veh tuah uh hi tih in zoh angah cun zoh ko uh ,afak tak tak.
မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေ အချင်းချင်းနိပ်စက်နေကြတာပါ။ ကူညီနိုင်မယ့်သူရှိရင်ကောင်းမည်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်၊ တောင်ရှည်ပြင်ကျေးရွာ ( ချင်းရွာ ) နေ၊ မောင်ကြီး အသက် ၁၉ ခန့်မှန်းခြေ ရှိတဲ့ကောင်လေးဟာ သူလုပ်နေတဲ့ခြံမှာ အလုပ်မလုပ်ချင်တော့လို့ထွက်ခွာမည့်အခြေအနေကိုသိတဲ့ သူ့ရဲ့ပွဲ့စားက လူမိုက်တွေငှါးပြီး ညုင်းဆဲ့ခိုင်းတယ်လို့သိရပါတယ်။ပွဲစားခကိုလည်း ခြောက်လတိတိဆပ်ပြီးပါပြီအဲ့ဒီခြံမှာ မလုပ်ချင်တော့လို့ ထွက်သွားမှာကို ပွဲစားကသိလို့ ရိုက်ခိုင်းတယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားမှာ မရှိလို့အလုပ်လာ လုပ်တာချင်းအတူတူ မြန်အာအချင်းချင်းအခုလိုနိပ်စက်တာမကောင်းပါဘူး။ခုဒီကောင်လေးဟာ သေသလားရှင် သလားဆိုတာ သူ့မိဘမှ မသိရသေးပါဘူး။ငိုနေကြတယ်လို့သိရတယ်။ကူညီနိုင်မဲ့သူရှိရင်ကူညီပေးကြပါ။ခုVideo မှာ မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။လူတိုင်းအမှားနဲ့မကင်းဘူး အဲ့ဒီအမှားတစ်ခုကို ဒီလောက်ပေးဆပ်ရသလား။Video-Crd-ချင်းလူမျိုးတို့ တွေ့ဆုံခွင့်
Posted by ကီမာမြေ on Tuesday, June 11, 2019
Zuari mi pa nih Kulza zuarnak dawr mei akhangh
Malaysia ah kal Burma mi ten anthian pa ansawi sat na video